Digital Clock Bluetooth Speaker – Rocket Online Shopping
Home ShopElectronicDigital Clock Bluetooth Speaker
Digital Clock Bluetooth Speaker quantity
Categories: Electronic, Music.	Tags: bluetooth 5.0 clock, bluetooth speaker, digital clock, digital display cloc, Fm radio clock, function clock, hand free call, new design, စားပွဲတင်နာရီ, ထစ်တာ မဖြစ်, ဒီဇိုင်းဆန်း, ဖုန်းနဲ.ချိတ်နိုင်, သီချင်းနားထောင်, အချိန်ပြ.
သငျ့ရဲ့ အိပျခနျးလေးထဲမှာ စားပှဲတငျနာရီလေးရှိလား………..?
Function ကပြွီး ဒီဇိုငျးဆနျးတဲ့နာရီလေးက ဖုနျးနဲ့ ခြိတျဆကျပွီးသီခငျြးတှနေားထောငျလို့ရမယျ…. FM radio နားထောငျလို့ရမယျ SD card ထညျ့ပွီးသီခငျြးတှနေားထောငျလို့ ရမယျဆိုရငျရော သဘောကမြလား………
နာရီအခြိနျတှကေို ရှငျးလငျးပွတျသားတဲ့ Digital Diaplay နဲ့ ပွပေးမှာဖွဈပါတယျ……..
ဖုနျးနဲ့ wireless bluetooth ခြိတျဆကျပွီး သီခငျြးနားထောငျရတာ နှဈသကျတဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ Bluetooth Version 5.0 ကိုသုံးပေးထားတဲ့ အတှကျ သီခငျြးနားထောငျရာမှာ နောကျကတြာ ထဈတာတှမေဖွဈစပေဲ အေးအေးဆေးဆေးနားထောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ…………………။
ဖုနျးနဲ့ ခြိတျဆကျထားတဲ့ အခြိနျမှာ ဖုနျးလာရငျလညျး hand free call ပွောလို့ရသေးတဲ့ အတှကျ ပို အဆငျပွတောပေါ့………….။
အခြိနျပွတဲ့ LED display light ကို အလငျးအမှောငျသုံးမြိုးခြိနျလို့ ရတဲ့ အတှကျ မီး အလငျးရောငျရှိနရေငျ အိပျမပြျောတဲ့ သူတှအေတှကျတော့ အံကိုကျပါပဲ………….။
2000mAh battery ပါတဲ့ အတှကျ အားအပွညျ့သှငျးထားပွီး နာရီအတိုငျးပဲ သုံးမယျဆိုရငျတော့ 45 နာရီ ဆကျတိုကျအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပွီး သီခငျြးနားထောငျမယျဆိုရငျတော့
360 degree surround sound Quality ဖွဈတာကွောငျ့ သီခငျြးဖှငျ့ထားတဲ့ အခါ ထောငျ့ပေါငျးစုံက ကွားနရေသလိုခံစားရမှာပါ………..။
Dual alarm system လညျးပါတဲ့ အတှကျ အအိပျမကျတဲ့ အိပျပုတျလေးတှအေတှကျတော့ အဆငျပွဆေုံးပါပဲနျော……………..။
ဈေးနှုနျး – 11000 kyats
09961127000 (Ooredoo )
09-692326159 (My tel)
ရနျကုနျမွို့တှငျး ပို့ခ free ပါ။
(မွို့တှငျး ၆ မွို့နယျသာ…)
Order ရနျ နညျးလမျးတှကေတော့ အထကျပါ Ph နံပါတျမြားကို စာပို့၊ ဖုနျးဆကျရုံသာမက Viber / Messenger မှ လညျး Order တငျနိုငျပါတယျနျော…
သင့်ရဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ စားပွဲတင်နာရီလေးရှိလား………..?
Function ကျပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့နာရီလေးက ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးသီချင်းတွေနားထောင်လို့ရမယ်…. FM radio နားထောင်လို့ရမယ် SD card ထည့်ပြီးသီချင်းတွေနားထောင်လို့ ရမယ်ဆိုရင်ရော သဘောကျမလား………
နာရီအချိန်တွေကို ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ Digital Display နဲ့ ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်……..
ဖုန်းနဲ့ wireless bluetooth ချိတ်ဆက်ပြီး သီချင်းနားထောင်ရတာ နှစ်သက်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် Bluetooth Version 5.0 ကိုသုံးပေးထားတဲ့ အတွက် သီချင်းနားထောင်ရာမှာ နောက်ကျတာ ထစ်တာတွေမဖြစ်စေပဲ အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…………………။
ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ဖုန်းလာရင်လည်း hand free call ပြောလို့ရသေးတဲ့ အတွက် ပို အဆင်ပြေတာပေါ့………….။
အချိန်ပြတဲ့ LED display light ကို အလင်းအမှောင်သုံးမျိုးချိန်လို့ ရတဲ့ အတွက် မီး အလင်းရောင်ရှိနေရင် အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အံကိုက်ပါပဲ………….။
2000mAh battery ပါတဲ့ အတွက် အားအပြည့်သွင်းထားပြီး နာရီအတိုင်းပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 45 နာရီ ဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သီချင်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့
360 degree surround sound Quality ဖြစ်တာကြောင့် သီချင်းဖွင့်ထားတဲ့ အခါ ထောင့်ပေါင်းစုံက ကြားနေရသလိုခံစားရမှာပါ………..။
Dual alarm system လည်းပါတဲ့ အတွက် အအိပ်မက်တဲ့ အိပ်ပုတ်လေးတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲနော်……………..။
ဈေးနှုန်း – 11000 kyats
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပို့ခ free ပါ။
(မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်သာ…)
Order ရန် နည်းလမ်းတွေကတော့ အထက်ပါ Ph နံပါတ်များကို စာပို့၊ ဖုန်းဆက်ရုံသာမက Viber / Messenger မှ လည်း Order တင်နိုင်ပါတယ်နော်…
Be the first to review “Digital Clock Bluetooth Speaker” Cancel reply
Portable Money Checker License Checker Light
Electronic, Gadget, Men, Security, Tools, Women
Electronic, Household, Mobile Phone Accessories, Technology
Solar Inster Killer and mosquito killer
Electronic, Household, Pet Accessories
Uncategorized, Electronic, Gadget, Gift, Girls, Household, Kitchen, Women
Car Driver Pillow Ks25,000.00 Ks19,500.00
Micro Touch One Ks20,000.00 Ks9,000.00
Swing Weight Ks25,000.00 Ks19,000.00
Handy Heater Ks30,000.00 Ks25,000.00
Ever Brite (Solar Auto Bulb) - Discount Ks19,000.00 Ks9,000.00
Triple Slicer Ks12,000.00 Ks9,000.00
Internet Mirascreen Ks99,000.00 Ks65,000.00
Window Stand - cloth hanger Ks26,000.00 Ks16,000.00
Tweeze Hair Remover- promotion items Ks15,000.00 Ks9,000.00